८ कक्षामा पढ्ने आफ्नी छोरी दुब्लाउँदै गएपछि आमाले लगिन् अस्पताल ! रिपोर्ट आएपछि उड्यो आमाको होस् – PathivaraOnline
Home > समाचार > ८ कक्षामा पढ्ने आफ्नी छोरी दुब्लाउँदै गएपछि आमाले लगिन् अस्पताल ! रिपोर्ट आएपछि उड्यो आमाको होस्
admin March 25, 2019 समाचार	0
काठमाडौँ । कक्षा ८ मा पढ्ने छोरी दिनदिनै दुब्लाउँदै गएपछि आमाले छोरीको हालत देखेर चेक जाँच गराउन अस्पताल लिएर गइन् । अस्पतलामा चेक जाँच पछि जे रिपोर्ट आयो त्यो उनीहरुको परिवारको लागि बज्रपात नै बन्यो । जबकी ती किशोरिलाई एचआयभी संक्रमण भएको थियो ।
पंजावको निजी स्कुलमा पढ्ने किशोरीको शरिरबाट यस्तो रिपोर्ट आएपछि उनकी आमा बेहोस् भइन् ।किशोरीको अनुसार उनको साथमा ११ र १२ कक्षामा पढ्ने ३ । ४ जनाको समूह रहेको र उनीहरुको सम्बन्ध निकै घनिष्ठ थियो ।
एक दिन तीनै साथीहरुले सोतो रंगको पाउडर ल्याएर सुँघ्न दिए त्यसपछि बिस्तारै बानी भयो ।बिगत १ वर्षदेखि यदि पाउडरको नशा लिँदै आएको बताइन् । किशोरीको अनुसार उनको गाउँकै केटाहरुले सप्लाई गर्ने गरेको र साथीहरुको माध्यमबाट आफुकहाँ आइपुग्ने गरेको उनले बताइन् ।